inverter basa mota kusiana kumhanya mota AC Inverter Shira mota
AC inverter basa drive mota kusiana kumhanya mota
Chitsva Chidimbu Inverter Motor
Global Supporter, Kunze kwenyika, uye Mugovanisi weIEC inverter basa mota, Variable Speed ​​Inverter mota
Inverter basa mota dhizaini
General Chinangwa vs. Inverter Duty
Inverter-basa mota mota iri nyowani nyowani yakazove yakakosha
sezvo mota dzakatanga kufambiswa neVFDs (inverters kana AC madhiraivha). iec inverter duty mota, Mazhinji madhiri ekare frequency ma driver aisiyaniswa nemhando yeinverter macryry anoshandiswa muVFD. 100 hp inverter duty mota, Inverter-basa mota mota inyowani nyowani yakazove yakakosha sezvo mota dzakatanga kufambiswa neVFDs. imwechete chikamu inverter basa mota, Industrial magetsi motors dziripo kune dzakawanda zvinowanzoshandiswa chinangwa mashandiro uye maitiro. Nekudaro, mamwe ma AC Variable Speed ​​application anoda anogara achimhanya.
Mhando dze AC Motors
Maindasitiri emagetsi emagetsi anowanikwa nekuda kwezvakawanda zvinangwa zvekushandisa uye maitiro.
Kana chimwe chezvigadzirwa izvi chiri chako, ndapota taura nesu! Isu takagadzirira uye tinotarisira kubatana kwedu. Isu tinotora mhando seyakanakira uye nemutengo wakaderera seuchokwadi. Iyo inoshanduka frequency frequency drive (VFD) imhando yemota mutyairi iyo inotyaira mota yemagetsi nekusiyanisa iyo frequency uye magetsi emagetsi aro. Washdown uye Paint-Yemahara shanduro dzeedu AC Inverter Drive mota dzakagadzirirwa kuchinjika kumhanya.
Imwe chete kusvika kuChitatu Phase VFD Iyo inodhura nzira ndeyekutenga imwechete chikamu kusiana frequency frequency drive (VFD) kuti basa riitwe. PowerDrive's 3000 Watt simba inverter inoratidzira Bluetooth isina waya tekinoroji ine APP interface yekure kure kuwana inokutendera iwe nyore kugadzirisa marongero. Inverter-basa mota mota iri nyowani nyowani yakazove yakakosha sezvo mota dzakatanga kufambiswa neVFDs.
Bata Isu Zvino.